कोरोना सङ्क्रमितले के गर्ने ? के नगर्ने ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकोरोना सङ्क्रमितले के गर्ने ? के नगर्ने ?
कोरोना सङ्क्रमितहरुले मनोबल बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला कोरोना के हो र कसरी सर्छ ? भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
कोरोना सङ्क्रमण एकखालको भाइरस इन्फेक्सन हो । अरु भाइरसले जस्तै कोरोना भाइरसले पनि आफ्नो स्वरुपमा परिवर्तन गर्छ । स्वरुप परिवर्तन गर्दा कतिपय भाइरस धेरै आक्रामक भएका हुन्छन् भने केही कम आक्रामक भएका हुन्छन् ।
(शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. राजभण्डारीसँग जानुका दुवाडीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)